Iindaba - Iindaba ezilungileyo: I-Springbio, iSebe le-Hangzhou, yandisa ifomula yayo entsha Yondla i-pigment -Canthaxanthin min.10% CWS.
I-Springbio, iSebe le-Hangzhou, yandisa ifomula entsha ye-canthaxathin ye-10% yokutya kwe-CWS.Iyakwazi ukunyibilika lula emanzini apholileyo kwaye ibonise ubomvu obomvu.
Intwasahlobo ebomvu i-10% ikhululekile, i-granulated carotenoid iimveliso.Ziquka iibeadlets ezincinci apho i-carotenoid isasazwa ngokucokisekileyo kwisityalo esifakwe kwi-starch-encapsulated kunye ne-carbohydrate matrix apho i-antioxidants iye yongezwa, okwenza iimveliso zaseNtwasahlobo zingenalo izilwanyana.
Inkqubo ekhethekileyo yokwenziwa, eyaziwa ngokuba 'yi-spray-dried coating', ikhusela i-carotenoids kwi-oxidation kwaye izinike uzinzo oluphezulu, ukusasazeka kwamanzi, iimpawu ezibalaseleyo zokuxuba, kunye neempawu ezintle kakhulu zokufunxa.
Ifomula entsha yeCanthaxanthin min.10% CWS
Iizithako CNJENGOKO NO. Cugxininiso (w / w%)
I-calcium lignosulfonate 8061-52-7 40.0%
I-Maltodextrin 9050-36-6 36.0%
Sitotshi 9005-25-8 10.0%
Dl-α-ukuyai-copherol 10191-41-0 2.50%
Ukusasazwa ngokukhawuleza !Icace kwaye iqaqambe ngaphandle kokungcola
0.5g Spring ebomvu Canthaxanthin 10% CWS inyibilika kumanzi angama-240ML (20℃) phakathi.
I-0.5g ye-Canthaxanthin 2.5% ichithe kwi-240ML yamanzi (20℃) kwicala lasekhohlo.
I-0.5g i-Canthaxanthin i-10% (enye i-brand) inyibilika kwi-240ML yamanzi (20 ℃) ​​phakathi.
Uvavanyo lwe-Yolk: umbala
Ukongeza kumanzi, i-lipids kunye neeprotheni, i-yolk iqukethe i-carotenoids ejongene nombala we-yolk.
Njengoko iinkukhu zingakwazi ukuzidibanisa, zonke ii-carotenoids ezikhoyo kwi-yolk zivela kwisondlo esinikezwa kwiinkukhu ezizalelayo.Umlinganiselo oqulethe umbona otyheli, ukutya kwe corn gluten, ilucerne, izithako ezityebileyo xanthophyll ezifana nentyatyambo (marigold), isityalo (i-paprika) izicatshulwa okanye izithako ezikhethekileyo ezifana neSpring Red & yellow® ziya kubonelela ngeecarotenoids ezininzi kunezahlulo ezisekelwe kwingqolowa.Ngoko ke, umbala, ukuqina, umthunzi kunye ne-homogeneity ye-yolk kuxhomekeke kwisabelo esondliwa kwiinkukhu kunye nokukwazi kwabo ukufunxa ngokufanelekileyo kunye nokubeka i-carotenoids kwi-yolk.
Kumazwe amaninzi, abathengi bakhetha i-yolk yegolide entle, kunye nabavelisi beqanda kufuneka baqinisekise ukuba bahlala behlangabezana nolu lindelo ngokujonga ubunzulu bombala womthubi kwaye balungelelanise ukwakheka kwezabelo ezinikwa inkukhu ezizalelayo ngokufanelekileyo.
I-Springbio yasungulwa kwi-2013 kwaye ngoku iyinxalenye ye-CNC (eyasungulwa ngo-2003), iya kuba yinkokeli ekudaleni izongezo zokutya kunye nesondlo sokutya .I-Springbio ikumema ukuba ufumane ngakumbiwww.springbio.com
ICurcumin Amacwecwe eCurcumin Piperine ICurcumin Piperine Capsules Astaxanthin Powder Astaxanthin Beadlet ICurcumin yeTurmeric